Ukuvela kokuqala emva kweentsuku ezintandathu nge-iOS 10 | IPhone iindaba
Ukuvela kokuqala emva kweentsuku ezintandathu nge-iOS 10
Sisecicini lokwenza iveki yokuqala ye-iOS 10, ke ngoko, kwaye njengoko sisazi ukuba abasebenzisi abaninzi bajonge ukusebenza kwe-iOS 10 ebusweni be-betas yoluntu enokuthi ifike kwiiveki ezimbini, kunye nofakelo olunokwenzeka Iibhetas zabaphuhlisi Ukulangazelela ukuvavanya, siza kukuxelela ukuba sibe njani emva kweentsuku ezintandathu zokusebenzisa ne-iOS 10. Sisebenzise ngesiqhelo isixhobo, ukusukela oko kufakelo lwe-iOS 10. Sivavanye Ukufakwa kwale beta yokuqala ye-iOS 10 zombini nge-OTA kuhlaziyo, nangokubuyisela isixhobo ngqo. Kwenzeka, Siza kukuxelela ukuba sikufumene njani ukusetyenziswa kwe-iOS 10 emva kweveki kucofwa uninzi lwenkqubo entsha yokusebenza Ifowuni yeApple.
Ukuphelelwa lithemba, hype, ukwazi, amathandabuzo kunye noloyiko, konke oku kuhlala kukukhathaza entloko ngelixa ukhuphela i-beta yokuqala yenkqubo yokusebenza. Mininzi iminyaka apho umncedisi ebevavanya i-betas, enyanisweni, ndifikile kwisigqibo sokuba ndihlala kwi-beta engapheliyo ye-iOS, ke ngoko, xa ndibuyela kuhlobo oluzinzileyo lwe-iOS ndiyayonwabela njengengulube ”. Ndigqibile ukufakwa kwe-iOS 10 Beta 1 malunga noMvulo malunga ne-23: 00 emva kwemini, kwaye ezi zizigqibo ze-iOS 10 kwi-iPhone 6.
1 Ukufakwa kokuqala: Via i-OTA ngokusebenzisa iprofayili yonjiniyela
2 Ukufakwa kwesibini: Ukucoca okucocekileyo kwi-iOS 10
3 Isiphelo malunga ne-beta yokuqala ye-iOS 10
Ukufakwa kokuqala: Via i-OTA ngokusebenzisa iprofayili yonjiniyela
Siyazi ukuba le ayisiyondlela ifanelekileyo yokufaka i-iOS 10, kodwa besingxamile. Ukusuka ekuphulukaneni nomlambo, siya apho kunye nomthambo wokuqala. Sifaka iprofayili yonjiniyela ukuba ugxa wethu uLuis Padilla unobubele ngokwaneleyo ukuba asibonelele ngamaxesha afanelekileyo. Uhlaziyo luyakhawuleza kwaye luthatha kancinci, IOS 9.3.2 ihlala ihlala malunga ne-2,1 GB yogcino lwe-iPhone yethu, kwelinye icala i-iOS 10 ifikelele kwi-1,7 GB. Umbono wokuqala owanelisayo, i-iOS 10 yinkqubo yokusebenza enzima kancinci.
Emva kokuba ufakelo lugqityiwe, khange sidinge ukumisela nantoni na, kuba sihlaziyiwe. Ukusebenza kwakulungile ngokumangalisayo, ucinga ukuba yayiyi-beta yokuqala. Nangona kunjalo, Amaxesha okulayisha kwezicelo zokuqhubeka kokusebenza aye andiswa ngokukodwaKwelinye icala, kufuneka sitsho ukuba izaziso zisebenza ngokuchanekileyo, sinokuphendula ngokukhawuleza kwizaziso nakwezinye izinto ezininzi. Inkqubo yemiyalezo isebenze ngokuchanekileyo xa sinxibelelana noogxa bethu ababefake i-beta ye-iOS 10.
Nangona kunjalo, ibhetri yayifa ngesantya sombane, into eyenzekayo kwinkqubo eyayibangela ukuba ishushu ngokungaqhelekanga, kwabonakala ngathi i-RAM ilahlekile, into ayikhange iphathwe kakuhle, kwaye ibhetri ibiphaphazela. Kwelinye icala, ikhamera, ifumene kancinci, ayifotanga ngokukhawuleza njengangaphambili. Nangona kunjalo, amanqaku amatsha asebenze ngokugqibeleleyo. Nangona kunjalo, ngenxa yokusetyenziswa kwebhetri enzima, siye sagqiba ekubeni sizame kwakhona, ngeli xesha siza kufaka i-iOS 10 njengokubuyisela okucocekileyo.
Ukufakwa kwesibini: Ukucoca okucocekileyo kwi-iOS 10
Inkqubo ibi krwada kolu fakelo. Ngokucacileyo, besingayivavanyi kwisixhobo se-RAM ye-2GB, kwaye oko kwakokohlwaya ngokuthe ngqo ukusebenza kwebhetri kunye nopopayi. Eyokugqibela iyitshintshile inkqubo, ngoku zazimnandi ngakumbi ukujonga, nangona kunjalo, ukuqina kwaba rhoqo. Kwakunqabile ngomhla apho isixhobo singakhange siqalise kwakhona, kunye nokuhamba kwexesha, sicinga ukuba ngenxa yokuqokelelwa kwedatha, isixhobo siye sacotha, ukuya kwinqanaba lokuba lag ibikhona kwinxalenye nganye yenkqubo yokusebenza. Okwangoku, izaziso ziyaqhubeka nokusebenza ngokufanelekileyo.
Isiphelo malunga ne-beta yokuqala ye-iOS 10
IOS entsha ithembisa okuninzi, kwaye inyani. Ndikhumbula ngokunxunguphala ii-betas zokuqala ze-iOS 7 kunye ne-iOS 8, zazinencasa, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba zisuswe. Oku akwenzekanga nge-iOS 10, nangona kunjalo, ngenxa yezizathu ezicacileyo, Ndibuyele kwisimo sam esomeleleyo nesinamandla se-iOS 9.3.2.
Ukusetyenziswa kwebhetri kubonakala ngathi akufuneki kuyeka, kwaye sifumene isitshixo sengxaki, IOS 10 ayiqwalaseli ulawulo lwezicelo ngasemva ngokuchanekileyoOko kukuthi, zonke usetyenziso ongakhange uzivale ngokuthe ngqo kwimultitasking ziyaqhubeka zisebenza ngasemva nangona zingakhange zisebenze kuseto, kwaye kulapho yonke ibhetri yahlakazeka khona.
Isiphetho kukuba Yibeta yokuqala, ke akukho nto inokuphinda ibuzwe kuyo. Inyani yile yokuba isebenza kakuhle ukuba sijonga ukuba yintoni, enyanisweni, ndinobuganga bokuthi yeyona beta ilungileyo kwiminyaka emine. Nangona kunjalo, andikukhuthazi ukuyifaka nakubani na kwisixhobo sayo esiphambili se-iOS, ukuqala kwakhona, idreyini yebhetri kunye nokushushubeza kunokuchaphazela ngokubonakalayo ukusebenza kwesixhobo. Olu luphononongo lwethu lokuqala, kodwa siza kubuya nge-beta yesibini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ukuvela kokuqala emva kweentsuku ezintandathu nge-iOS 10
Ewe, nyana ... kulungile, bendisebenzisa i-6-gigabyte iPhone yam ene-iOS 6 beta 16 iprofayile ye-OTA kangangeentsuku ezi-10 ... kwaye ndifumana malunga neeyure ezisi-1 ZOKUSETYENZISWA ... .isixhobo asitshisi, ndinamanzi kakhulu ...
Ndiqhuba kakuhle, kwi-iPad yam i-airb1 ngaphezulu ngokufanayo andikayilayishi nge-iOS 10 kangangeentsuku ezimbini ...
Ndiyifakile kwi-iPhone 5c kwaye ubomi bebhetri bukhulu kakhulu kunaleyo ye-iOS 9.3.2, eneneni i-iOS 10 inamanzi kakhulu kwisixhobo sam kunjalo ngaphandle kwezicelo ezibonisa ukungazinzi kodwa kwezinye zihamba kakuhle
Mario burga (@cyberespia) sitsho
Andazi ukuba yeyiphi i-iPhone ezakube isebenzisa umhleli mhlawumbi i-3Gs hahaha #okno. Kodwa ungamhoyi, into ayikhankanyayo kwinqaku lakhe YIBUYINYANISO ngokupheleleyo. Kudala ndisebenzisa i-beta1 ukusukela ngeyure zokuqala yabona ukukhanya kwaye khange ndibenangxaki zebhetri kwaye ekuphela kwento eqhelekileyo kukuvalwa amaxesha ngamaxesha.
Ukuzimela kuyafana nokuba bekukho nohlobo oluzinzileyo kwaye ezinye iiblogi ezizodwa ziyafundwa kwaye ngakumbi ngesiNgesi ziyafana.
Phendula kuMario Burga (@cyberespia)
Eyam ayifudumezi, ihamba ngokukhawuleza kwaye ibhetri ihlala ngokufanayo, andinangxaki, andazi nokuba kungenxa yokuba zii-6s
Siye saba nenkqubo engazinzanga iminyaka emithathu (iOS 7, iOS 8 kunye ne-iOS 9). Ukusukela ukutsiba ukusuka kwi-iOS 6 ukuya kwi-iOS 7 eneempawu ezoyikisayo ekufanele ukuba saziqhela. Iminyaka emine idlulile kwaye yonke le nkqubo ibonakala ngathi iyinto yokwenyani kum, ineempawu ngaphandle kobuntu, iinqwelomoya kunye nayo yonke into enomhlophe ogqithileyo otshabalalisa ukubona kwakho. Ngokubhekisele kuzinzo ... andazi ukuba zeziphi iimilongas ozithembileyo. Unyaka ngamnye ibali elifanayo. Okokuqala kuba zii-betas kwaye ke ngenxa yokuba ziinguqulelo zokuqala kwaye inkqubo kufuneka ikhule. Sineminyaka emi-4 sinje. Sichitha unyaka wonke kuvavanywa ii-betas kwaye akukho nto uyenzayo ngaphandle kokutsala izihloko ukuthethelela ukungazinzi. Hayi, yi-beta yokuqala kodwa ngo-Septemba iya kufana ncam. Yintoni le ubala izinto ngokungathi konke ukushiyeka kunye nokucotha ukusuka kuhlobo olunye ukuya kolunye kuya kuthi shwaka kwiveki. Kwaye ke besineminyaka emithathu ... Kubonakala ngathi akukho mntu ukhumbula uzinzo lwe-iOS 3 kwaye AKUKHO MEDIA OKANYE IBloggi egxeka ukungabikho kwayo. Siye sanda kakhulu. Kutheni le nto i-iOS isiba mandundu ngokuhamba kweminyaka? Kutheni le nto imbi ngakumbi kwiifowuni ezindala? Kutheni le nto mac kwelinye icala ihamba ngcono kunye neminyaka? Ngexabiso? Andicingi njalo, kufanelekile ukuba ngubani othi i-iPhone ithi yiMacbook Air. Zimbalwa iinyaniso kwaye bambalwa abantu ababona izinto ngokungangqalanga kwaye ziyinyani.
Ndiyavumelana ngokupheleleyo nawe!
Juan Fran (@ Juan_Fran_88) sitsho
Ndinayo ukusukela kusuku lokuphehlelelwa kwaye andikabinakuqala kwakhona, ndisale ukuba ndinamaxesha ngamaxesha xa ndivula imisebenzi emininzi kwaye uninzi lwezicelo endizisebenzisayo ndinengxaki ze-Facebook amaxesha ngamaxesha.
Phendula kuJuan Fran (@ Juan_Fran_88)
kwi-iPhone SE, i-facebook ihlala ivala kwaye ibhloka ngokupheleleyo nge-swiftkey, kungenjalo yonke into ilungile
UYesu Uyaphumelela sitsho
Inkqubo yokusebenza ye-io10 inobunzima be-1.7G kuba ngokuchanekileyo iyona beta yokuqala, uhlaziyo ngalunye okanye i-beta eyongeziweyo iya kunyuka ukuya kwinqanaba lokudlula kwi-2G
Aaaah! Ndikhumbula kamnandi i-iPod touch 5 yam kwi-iOS 6, eyona nkqubo isebenzayo ngokwendlela yokusebenza kunye ne-interface: c ukuba ndingathanda kanjani ukubuyela kuyilo oluhle olwalusetyenziswa ngaphambili: c
I-iPhone 6 yam yayifudumeza njengesitovu, kodwa emva kokusetha kwakhona nzima, yonke into yatshintsha kwaye isebenza njengekhubalo.
Inkxaso yezobugcisa eDairo sitsho
Ndizamile ukusuka kwangolo suku ikhutshiweyo ngalo, iya ihamba kakuhle, kuyinyani ukuba iyaphefumla uhlobo lokuqalisa kwakhona xa ivula imisetyenzana emininzi ngamanye amaxesha kodwa ayitshisi kwaye ayikhuphi bhetri ibhetri.
Phendula kwiNkxaso yeNkxaso yeDairo
Ezona mpawu ziphambili zeBluetooth 5.0